20 ducadood oo salaadda la joojiyo MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 20 salaadood ayaa tilmaamaya in la burburiyo fibroids
20 salaadood ayaa tilmaamaya in la burburiyo fibroids
Fibroid-ka waa koritaanka shaydaan jirka haweeneyda, taas oo badanaa keenta arrimaha uureysiga sida dhicin, iyo dhibaatada dhalista ilmaha. Tani waa dhibaato sheydaan, maanta waxaan u duceyneynaa 20 bar salaadood si loo baabi'iyo fibroid. Iyada oo la adeegsanayo dhibcaha salaadda, waxaad ku qaadi kartaa dagaal ruuxi ah oo wax ku ool ah oo ka dhan ah jinka ka dambeeya fibroids. Ereyga Eebbe wuxuu inoo sheegayaa in marka la xuso magaca Ciise Masiix, jilib walboo waajib ku yahay inuu sujuudo, magaca Ciise ayaa ka sarreeya magac kasta oo kale, oo ay ku jiraan magaca "fibroid".
Sidaa darteed tukashadan ugu ducee si rumaysad ah maanta. Inkaar kasta oo ku jirta jirkaaga oo ku amar in lagu khafiifiyo magaca Ciise. Jinni kasta ka saar godka cadaabta oo aan mas'uul ka ahay wixii ku soo kordha shaydaan ee nidaamkaaga. Xorriyaddaada ugu sheeg magaca Ciise. 20-kaan salaadood waxay tilmaamayaan in lagu burburiyo fibroids-ka weligood adiga ayaa ku samatabbixin doona. Waxaan sugayaa inaad la wadaagto markhaatifurkaaga.
1. Aabe, waan kuugu mahad celinayaa maxaa yeelay waan ogahay inaad markasta i maqasho, qaado ammaanta Ciise oo dhan.
2. Wax kasta oo jidhkayga ka mid ah waan ka soo badbaadiyaa xumaanta reerka, magaca Ciise.
3. Shay kasta oo shar ah oo noloshayda qabsada, ku hay magaca Ciise.
4. Waan baabi'iyaa xukun kasta oo jinni ah oo lagula kaco xubin kastoo jirkayga ka mid ah,
5. Naarta Ruuxa Quduuska ah, tirtir waxkastoo cay ah oo noloshayda ku nool, magaca Ciise.
6. Waan diidanahay naqshad kasta iyo shay kasta oo magacayga lagu dhigay, oo lagu bixiyay magaca Ciise.
7. Si kasta oo aan si miyir leh ama miyir leh uga cuno miiska cadowga waxaa noloshayda ka soo baxa hadda, magaca Ciise.
8. Waan tirtirayaa caqiido kasta oo jinni ah oo ka dhan ah guurkayga iyo midhahayga magaca Ciise.
9. Waxaan ku tuurayaa dhammaan jinniyada ka gadaal dhibaatooyinkeyga waxaan ku ridayaa dabka xukunka, magaca Ciise.
10. Dhiig, dabka iyo biyaha nool ee Ilaaha ugu sarreeya ha nadiifiyo nidaamkayga nadaafadda: - koritaanka aan faa'iido lahayn ee uurkayga ku jira, keydka xumaanta ee ka yimaadda ninka ruuxa leh, shaybaarka xun, sumadaha iyo khadka, wasakhda laga helay wasakhda waalidka, xumaanta. beero, sunta shaydaanka magaca Ciise.
11. Wax kasta oo jidhkayga ka mid ah ha u kululaadaan in masiibo kasta oo lagu dego magaca Ciise.
12. Wax kastoo ku soo kordha noloshayda, dab baa ka rujin doona, magaca Ciise.
Jidhkaygu ha ii diidno guri kasta oo shar ah, magaca weyn ee Rabbigeenna Ciise Masiix.
14. Waxaan ku saarayaa wixii shaydaan ah ee shaydaan ku jira xiidmahayga, magaca Ciise.
15. Waxan ku saarayaa wixii shaydaan ah ee Shaydaanka ah ee ku jira xubnaha taranka, magaca Ciise.
16. Wax alla wixii shaydaan ah ee shaydaan ku dhex tuuro, ee magaca Ciise.
17. Gacanta shisheeye baa uurkayga hooyaday ku sii daysey, magacii Ciise.
18. Ha ku mucjiso mucjisooyin hal abuur ah calooshayda iyo habka taranka, magaca Ciise.
19. Aabbow, waxaan kaa baryayaa magaca Ciise Masiix inaad u soo dirto malaa'igtaada si ay u silciyaan oo ay u baabi'iyaan weelasha wax lagu kaydiyo oo sharraxa oo dhan.
20. Waxaan xidhayaa oo aan wax aan waxtar lahayn ka dhigayaa nin kasta oo xoog u leh uurkayga, magaca taranka iyo nolosha guurka, magaca Ciise.
article Previous50cm salaadda ayaa tilmaamaysa xumaanta guriga
Next articleDhibcaha salaadda cibaadadu waxay ka hortagaan kuwa guurka ku xadgudbay
Chibuzor Emefiene Febraayo 27, 2020 Markay tahay 8:48 am
Si naxariis leh ii caawi salaadaha
Chantel Abriil 27, 2020 XXX: 7 pm
Fadlan haddii aad ii duceyn karto. Waxaa i xanuunaya fibroids. Waxay ahayd 4 bilood Waxaan isku dayay in aan uuraysto. Waxaan dareemayaa fibroids-ka dhinaca bidix ee jirkeyga. Tani waxay iga hortageysaa inaan ilmo dhalo. Waxaan ubaahanahay dhaqaaqa ilaahada hada.
Jane Luulyo 4, 2020 saacadu markay ahayd 11:27 am
Fadlan ii ducee waxa xun ee loo yaqaan friboids dhibaatada haysata noloshayda
Deepa Agoosto 28, 2021 XXX: 12 pm
Pls ii soo ducee waxaan qabaa fibroid waxaan rabaa inaan uur yeesho pls ii soo ducee
Dhibcaha Salaada Si Loo Joojiyo Riyooyinka Xun
100 duco oo loogu talagalay dhicista halista ah
Aayadaha Baybalka ee ku saabsan Hoggaanka